श्रीमानको जब इच्छा हुन्छ तब अस्विकार गर्न सक्दै सकिदैन….., आखिर किन ? - Info Nepal
INFONPLअन्तराष्ट्रियश्रीमानको जब इच्छा हुन्छ तब अस्विकार गर्न सक्दै सकिदैन….., आखिर किन ?
श्रीमानको जब इच्छा हुन्छ तब अस्विकार गर्न सक्दै सकिदैन….., आखिर किन ?
श्रीमानको जब इच्छा हुन्छ तब अस्विकार गर्न सक्दै सकिदैन….., आखिर किन ? विश्वमा यस्ता कैयौ देशहरु छन, जो आफनो अनौठो–अनौठो कानुनलाई लिएर सधै चर्चामा आइरहन्छन् । यस्तै देशहरु मध्येको देश हो ईरान, जहाँ यस्तै–यस्तै अनौठा कानुन रहेकाे छ, जसको बारेमा जानेर मानिसहरु अचम्ममा पर्दछन् जुन यश प्रकार छन्:-
२) यहाँ महिलाहरुले टा- इट पा- इन्ट लगाउनु अ* परा- धको श्रेणी मानिन्छ । साथै यहाँ यो पनि कानुन छ कि महिलाहरु आफनो श्रीमानले चाहेको बेला यौ* ‘*न सम्पर्क गर्नको लागी मनाहि गर्न सक्दैनन् ।
३) यहाँ पिता आफनो छोरीसँग पनि विवाह गर्न सक्छ । २०१३ मा ईरानमा यो कानुन पास भएको थियो, जस अन्तर्गत कुनै पनि पिता आफनो धर्मपुत्रीसँग विवाह गर्न सक्दछन् तर यसको लागी छोरीको उमेर कम्तिमा १३ बर्ष हुनुपर्दछ ।
४) ईरानमा केबल पुरुषलाई मात्र डि* भो* र्सको अधिकार दिइएको छ । यहाँ महिलाहरुलाई यो हक छैन कि उ पुरुषसँग डि* भो* र्स माग्न सकुन । यसको अलावा पतिको मञ्जुरी बिना यहाँ महिलाहरुलाई काम गर्न पनि प्र- तिबन्ध छ ।
५) यो देशमा महिलाहरु स्टेडियममा गएर पुरुषहरुको खेल हेर्न सक्दैनन् । साथै यहाँ हि-जा- ब नलगाउने महिलालाई २ महिनाको जेलको सजाय हुन्छ ।
६) यहा सडकमा उभिएर गित गाउनुलाई अ* ’परा* ’ध मानिन्छ । साथै, यो देशमा टाई लगाउन समेत प्रतिबन्ध रहेकाे छ ।